“Ndiani Ari Kurutivi rwaJehovha?”​—Eksodho 32:26 | Yekudzidza
“Unofanira kutya Jehovha Mwari wako.Umushumire, unamatire kwaari.”—DHEUT. 10:20.
NZIYO: 28, 32
Kunyange zvazvo Kaini naSoromoni vaiti vaishumira Jehovha, nei vasina kufarirwa naye?
Mosesi naAroni vakaratidza sei kuti vaiva kudivi raJehovha?
Tinganyatsobatsirwa sei netsitsi dzaJehovha uye kuregerera kwake?
1, 2. (a) Nei kuva kudivi raJehovha kuri kuchenjera? (b) Tichakurukurei munyaya ino?
ZVINE musoro kuti tinamatire kuna Jehovha. Hakuna ane simba, akachenjera kana kuti ane rudo kupfuura Mwari wedu! Ndiani wedu asingadi kuva kudivi rake? (Pis. 96:4-6) Kunyange zvakadaro, vamwe vashumiri vaMwari vakatadza kuramba vari kudivi raJehovha.
2 Munyaya ino tichakurukura nezvevanhu vaiti vaiva kudivi raJehovha asi panguva imwe chete vachiita zvinhu zvinomugumbura. Nyaya dzevanhu ivavo dzine zvidzidzo zvinokosha zvinogona kutibatsira kuti tirambe takanyatsovimbika kuna Jehovha.
JEHOVHA ANOONGORORA MWOYO
3. Nei Jehovha akayambira Kaini, uye Jehovha akamuudza kutii?
3 Funga nezvenyaya yaKaini. Akanga asinganamati mumwe mwari uye aizviti ainamata Jehovha. Asi kunamata kwaKaini kwaisagamuchirwa naMwari. Chido chekuita zvakaipa chaikura mumwoyo make. (1 Joh. 3:12) Jehovha akamuyambira achiti: “Kana ukaita zvakanaka, haungakwidziridzwi here? Asi kana ukasaita zvakanaka, chivi chiri kukuvandira pasuo, chiri kuda iwe; asi iwe uchachikunda here?” (Gen. 4:6, 7) Jehovha aitoudza Kaini kuti, “Kana ukapfidza wova kudivi rangu, iniwo ndichava kudivi rako.”
4. Paakawana mukana wekuva kudivi raJehovha, Kaini akaita sei?
4 Kudai Kaini akangogadzirisa mafungiro ake aizofarirwa naJehovha. Asi Kaini haana kuteerera zano raakapiwa. Mafungiro asina kunaka uye chido chekuita zvakaipa zvakaita kuti atadzire Mwari. (Jak. 1:14, 15) Paaiva mudiki, Kaini anogona kunge asina kumbobvira afungidzira kuti aizopandukira Jehovha. Asi nekufamba kwenguva akazoita zvaakanga asingafungidziri kuti aizoita. Akapandukira Mwari ndokuuraya munin’ina wake chaiye!
5. Mafungiro api anogona kuita kuti tisafarirwa naMwari?
5 Sezvakaitwa naKaini, mazuva ano muKristu anogona kunge achiita zvisina kunaka asi achiti ari kunamata Jehovha. (Jud. 11) Semuenzaniso, mumwe anogona kunge achibuda muushumiri uye achigara achipinda misangano yeungano. Asi panguva imwe chete, anogona kunge achinyanya kuda pfuma, achivenga mumwe muKristu, kana kuramba achifungidzira achiita zvinhu zveunzenza. (1 Joh. 2:15-17; 3:15) Mafungiro aya anogona kuita kuti munhu aite chivi. Vamwe vanhu vanogona kunge vasingazivi mafungiro uye maitiro edu, asi Jehovha anoona zvinhu zvese uye anoziva kana tisiri kutsigira divi rake nemwoyo wese.​—Verenga Jeremiya 17:9, 10.
6. Jehovha anotibatsira sei kuti ‘tikunde’zvido zvakaipa patinotsigira divi rake nemwoyo wese?
6 Kunyange patinokanganisa, Jehovha haakurumidzi kutisiya. Munhu paanoita zvinhu zvinomuendesa kure naMwari, Jehovha anoti kwaari: ‘Dzoka kwandiri, uye ini ndichadzoka kwauri.’ (Mar. 3:7) Jehovha anoziva kuti tine zvatinokanganisa asi anoda kuti tirwise kuti tisaita zvakaipa. (Isa. 55:7) Kana tikadaro, anotivimbisa kuti achatibatsira uye achatipa simba ratinoda kuti ‘tikunde’ zvido zvakaipa.​—Gen. 4:7.
7. Soromoni akarasikirwa sei neushamwari hwake naJehovha?
7 Tinogona kudzidza zvakawanda kubva kuna Mambo Soromoni. Paaiva mudiki, Soromoni aikumbira kubatsirwa naJehovha. Mwari akamupa uchenjeri hwakakura uye akamupa basa rekuvaka temberi huru muJerusarema. Asi Soromoni akarasikirwa neushamwari hwake naJehovha. (1 Madz. 3:12; 11:1, 2) Mutemo waMwari wairambidza mambo wechiHebheru “kuzviwanzirawo madzimai, kuti mwoyo wake urege kutsauka.” (Dheut. 17:17) Soromoni haana kuteerera mutemo uyu. Akaroora madzimai 700 uye akatora varongo 300. (1 Madz. 11:3) Vakawanda vemadzimai ake vakanga vasiri vaIsraeri uye vainamata vanamwari venhema. Saka Soromoni haanawo kuteerera mutemo waMwari wairambidza kuroora madzimai emamwe marudzi.​—Dheut. 7:3, 4.
8. Soromoni akatadzira Jehovha zvakadini?
8 Zvishoma nezvishoma Soromoni akarega kuita zvinodiwa naJehovha uye akapedzisira aita zvakaipa chaizvo. Soromoni akavakira mwarikadzi Ashtoreti atari uye akavakirawo mwari wenhema Kemoshi atari. Akabatana nemadzimai ake pakunamata vanamwari venhema. Akavaka atari idzodzo pagomo rakanga rakatarisana neguta reJerusarema, maakanga avakira temberi yaJehovha. (1 Madz. 11:5-8; 2 Madz. 23:13) Zvichida Soromoni akazvinyengera achifunga kuti Jehovha aizongomurega achiita zvakaipa chero bedzi airamba achipa zvibayiro patemberi.
9. Chii chakaitika Soromoni paasina kuteerera zvaakayambirwa naMwari?
9 Asi vanhu pavanoita zvakaipa Jehovha haangosiyi zvakadaro. Bhaibheri rinoti: “Jehovha akatsamwira Soromoni kwazvo, nokuti mwoyo wake wakanga watsauka pana Jehovha . . . , iye akanga azviratidza kwaari kaviri. Iye akanga amurayira nezvechinhu ichi, kuti asatevera vamwe vanamwari; asi akanga asina kuchengeta zvakanga zvarayirwa naJehovha.” Izvi zvakaita kuti Mwari arege kumufarira uye kumutsigira. Vana vaSoromoni havana kuzotonga rudzi rwese rwevaIsraeri uye vakasangana nematambudziko akawanda kwemazana emakore akatevera.​—1 Madz. 11:9-13.
10. Chii chinogona kukanganisa ushamwari hwedu naJehovha?
10 Sezvakaitika kuna Soromoni, chimwe chezvinhu zvakakura zvinogona kukanganisa kunamata kwedu, ishamwari dzisingaremekedzi mitemo yaJehovha. Vamwe vanogona kunge vari muungano asi vasina kusimba pakunamata. Vamwe vanogona kunge vari veukama, vavakidzani, vatinoshanda navo, kana kuti vatinodzidza navo vasinganamati Jehovha. Pasinei nekuti ndivanaani, kana vasingaremekedzi zvinodiwa naJehovha, nekufamba kwenguva vanogona kuparadza ushamwari hwedu naye.
Shamwari dzako dziri kukubatsira here kuti uve neushamwari hwakasimba naJehovha? (Ona ndima 11)
11. Chii chingatibatsira kuona kana tichifanira kurega kushamwaridzana nevamwe vanhu?
11 Verenga 1 VaKorinde 15:33. Vanhu vakawanda vane humwe unhu hwakanaka, uye vakawanda vasiri muungano havaiti zvakaipa pachena. Kana zviri izvo zvinoitwa nevanhu vaunoziva, ungati ishamwari dzakanaka here? Zvibvunze kuti vachasimbisa ushamwari hwako naJehovha here? Zvii zvavanokoshesa? Semuenzaniso, vanonyanya here kutaura nezvefashoni, mari, zvinhu zvakadai semafoni nematablets, varaidzo, kana zvimwewo zvinhu? Vanonyanya here kutsoropodza vamwe kana kutaura nyambo dzinonyadzisa? Jesu akapa yambiro yakakodzera achiti: “Muromo unotaura zvinobva pazvizhinji zviri mumwoyo.” (Mat. 12:34) Kana ukaona kuti vaunoshamwaridzana navo vanogona kukanganisa ushamwari hwako naJehovha, usanyanya kushamwaridzana navo, uye kana zvakakodzera rega zvachose kushamwaridzana navo.​—Zvir. 13:20.
JEHOVHA ANODA KUZVIPIRA KWAKAZARA
12. (a) VaIsraeri vachangobuda muIjipiti, Jehovha akavavimbisei? (b) VaIsraeri vakapindura kutii Mwari paakavaudza kuti vave vakavimbika?
12 Tinogona kuwana zvimwe zvidzidzo pane zvakaitika kuvaIsraeri vachangobva kusunungurwa muIjipiti. Vanhu vacho vakaungana pedyo neGomo reSinai. Jehovha akabva azviratidza kwavari nenzira inoshamisa. Vakaona gore dema. Jehovha akaitawo kuti pave nemabhanan’ana, mheni, utsi uye kurira kunenge kwehwamanda kwaiva neruzha kwairamba kuchinzwika. (Eks. 19:16-19) Paiitika izvi, Jehovha akazviratidza kuvaIsraeri ‘saMwari anoda kuzvipira kwakazara.’ Akavimbisa kuti aizova akavimbika kune vanomuda uye vanoteerera mirayiro yake. (Verenga Eksodho 20:1-6.) Jehovha akanga achitoudza vanhu vake kuti, “Kana mukaramba muri kudivi rangu, iniwo ndicharamba ndiri kudivi renyu.” Kudai waivapo, ungadai wakanzwa sei nevimbiso yakapiwa naJehovha Mwari? Zviri pachena kuti waizoita zvakaitwa nevaIsraeri. “Vakapindura nenzwi rimwe chete, vakati: ‘Tinoda kuita mashoko ose ataurwa naJehovha.’” (Eks. 24:3) Zvisinei, pasina nguva pakava nechimwe chinhu chakaedza kuvimbika kwevaIsraeri.
13. Chii chakaedza kuvimbika kwevaIsraeri?
13 VaIsraeri vakavhundutswa negore dema, mheni, uye zvimwe zviratidzo zvinoshamisa zvakabva kuna Mwari. Vanhu vakakumbira Mosesi, uye akabvuma kuvamiririra pakutaura naJehovha paGomo reSinai. (Eks. 20:18-21) Mosesi akaita nguva yakareba ari pamusoro pegomo. VaIsraeri vakanga vapererwa here murenje vasisina mutungamiriri wavo wavaivimba naye? Zvinoita sekuti kutenda kwavo kwaibva pakutungamirirwa nemunhu wavaiona. Vakanetseka ndokuudza Aroni kuti: “Tigadzirire mwari achatitungamirira, nokuti Mosesi uyu, murume uya akatibudisa munyika yeIjipiti, hatizivi kuti chii chakaitika kwaari.”​—Eks. 32:1, 2.
14. VaIsraeri vakazvinyengera sei, uye Jehovha akaita sei?
14 Vanhu vaiziva kuti kunamata zvidhori yaiva mhosva yakakura kuna Jehovha. (Eks. 20:3-5) Asi pasina nguva vakanga vava kunamata mhuru yendarama! Kunyange zvazvo zvaiva pachena kuti vakanga vasina kuteerera, vaIsraeri vakazvinyengera nekufunga kuti vakanga vachiri kudivi raJehovha. Aroni akatotaura kuti kunamata kwavo mhuru yendarama waiva ‘mutambo unoitirwa Jehovha.’ Jehovha akaita sei? Akaudza Mosesi kuti vanhu vakanga “vaita zvakaipa” uye vakanga ‘vatsauka panzira yaakavarayira kuti vafambe nayo.’ Jehovha akatsamwa zvekuti akafunga kuparadza rudzi rwacho rwese.​—Eks. 32:5-10.
15, 16. Mosesi naAroni vakaratidza sei kuti vaiva kudivi raJehovha zvakakwana? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
15 Jehovha akasarudza kusaparadza vaIsraeri. Mutsa wake wakaita kuti vashumiri vake vakatendeka vawane mukana wekuratidza kuti vaida kuva kudivi rake. (Eks. 32:14) Mosesi paakaona vanhu vachiita ruzha, vachiimba, uye vachitamba vari pamberi pechidhori, akakuya-kuya chidhori chacho kusvikira chaita upfu. Akabva ati: “Ndiani ari kurutivi rwaJehovha? Ngaauye kwandiri!” “Vanakomana vose vaRevhi vakatanga kuungana kwaari.”​—Eks. 32:17-20, 26.
16 Kunyange zvazvo Aroni ari iye akagadzira chidhori chacho, akapfidza uye akabatana nevaRevhi vakanga vari kudivi raJehovha. Vanhu ivavo vakavimbika vakaenda kudivi raJehovha panguva imwe chete vachizviparadzanisa nevanhu vaiita zvakaipa. Vakaita chisarudzo cheuchenjeri; musi iwoyo zviuru zvevanhu zvakafa nemhaka yekunamata chidhori. Asi vaya vakaenda kudivi raJehovha vakavimbiswa kuti vaizokomborerwa.​—Eks. 32:27-29.
17. Tinodzidzei pane zvakanyorwa naPauro nezvemhuru yendarama?
17 Chii chatinodzidza? Muapostora Pauro akati: “Zvino zvinhu izvi zvakava mienzaniso yedu, kuti isu tirege kuva vanhu . . . vanonamata zvidhori, sezvakaita vamwe vavo. [Zvinhu izvi] zvakanyorwa kuti tinyeverwe isu tasvikirwa nokuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva ino. Naizvozvo anofunga kuti akamira ngaachenjere kuti arege kuwa.” (1 VaK. 10:6, 7, 11, 12) Sezvakataurwa naPauro, kunyange vanamati vechokwadi vanogona kutanga kuita zvakaipa. Vaya vanokurirwa nemuedzo vanogona kufunga kuti vachiri kufarirwa naMwari. Asi kana munhu achingoda kuva shamwari yaJehovha kana kuti achizviti akavimbika kwaari, hazvirevi kuti anotofarirwa naye.​—1 VaK. 10:1-5.
18. Chii chinogona kuita kuti tibve pana Jehovha uye zvinozoguma nei?
18 Sezvakaitwa nevaIsraeri avo vakatanga kunetseka Mosesi paakanonoka kudzoka kubva mugomo, vaKristu mazuva ano vanogona kunetsekawo nezvezuva raJehovha rekutonga uye kuuya kwenyika itsva. Tinogona kuona sekuti vimbiso idzi dziri kure chaizvo kana kuti kungori kurota. Kana mafungiro iwayo akasagadziriswa anogona kuita kuti munhu atange kukoshesa zvaanoda kupfuura zvinodiwa naJehovha. Nekufamba kwenguva tinogona kubva pana Jehovha uye kuita zvinhu zvataiona sekuti hatifi takaita.
19. Ichokwadi chipi chinokosha chatisingafaniri kukanganwa uye nei tisingafaniri kuchikanganwa?
19 Hatifaniri kukanganwa kuti Jehovha anoda kuti tinyatsomuteerera uye tizvipire zvakazara. (Eks. 20:5) Kuita chero chinhu chinotibvisa pana Jehovha kunoreva kuti tinenge tava kuita zvinodiwa naSatani uye izvi zvinotipinza muna taisireva. Pauro anotiyeuchidza kuti: “Hamugoni kunwira mukapu yaJehovha uye mukapu yemadhimoni; hamugoni kudyira patafura yaJehovha uye patafura yemadhimoni.”​—1 VaK. 10:21.
NAMATIRA KUNA JEHOVHA!
20. Jehovha anogona kutibatsira sei kunyange patinokanganisa?
20 Pane chinhu chakafanana pane zvinotaurwa neBhaibheri nezvaKaini, Soromoni uye nezvevaIsraeri vari paGomo reSinai. Vanhu ava vaiva nemukana ‘wekupfidza, votendeuka.’ (Mab. 3:19) Zviri pachena kuti Jehovha haakurumidzi kusiya vanhu vanenge vakanganisa. Aroni paakakanganisa, Jehovha akamuregerera. Mazuva ano, Jehovha anogona kutiyambira achishandisa nyaya dzemuBhaibheri, mabhuku anotsanangura Bhaibheri, kana kuti mazano anopiwa nevamwe vaKristu. Patinoteerera yambiro idzodzo, tinova nechokwadi chekuti Jehovha achatinzwira ngoni.
21. Tinofanira kutsunga kuitei panoedzwa kuvimbika kwedu?
21 Mutsa waJehovha une zvaunotibatsira. (2 VaK. 6:1) Unotipa mukana wekuti “tirambe zvinhu zvinopesana nezvinodiwa naMwari nokuchiva kwenyika.” (Verenga Tito 2:11-14.) Chero bedzi tiri “pakati pemamiriro ezvinhu epanguva ino,” tinosangana nezvinhu zvingatitadzisa kuramba tichizvipira zvakazara kuna Jehovha. Ngatitsungei kuramba tiri kudivi raJehovha nekuti, ‘tinofanira kutya Jehovha Mwari wedu.Timushumire, tinamatire kwaari.’​—Dheut. 10:20.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe “Ndiani Ari Kurutivi rwaJehovha?”